ငါ့ကိုငြိမ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အိပ်ဖို့နေရာမှာ porn လိုတယ်။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
ငါငြိမ်သက်သို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းမှငါ့ကိုထားရန် porn လိုအပ်ပါတယ်။
RebootNation.org တွင်အိပ်ရန် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်း Gabe Deem ၏ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
ပိုမိုဖိစီးမှု = တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း။ ကြိမ်နှုန်းနီးကပ်လာဗိုလ်လုပွဲတက်နှင့်စက္ကူမတိုင်မီတက်တတ်၏။ ၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေသည့်အပြင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင် ဦး နှောက်ကိုရှင်းလင်းစေသည်။
ရှည်လျားမဟုတ် ပြီးနောက် အော်ဂဇင် (တစ်ခါတစ်ရံပင်ဆယ်မိနစ်အကြာတွင်) သည်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများ၏ကြာချိန်နှင့်ပြင်းထန်မှုကွာခြားပေမယ့်ငါ, စိတ်-မိုးအုံ့ lightheaded, မျက်စိလည်လမ်းပျောက်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ orgasm ဒီပြဿနာတွေကိုသာအကြောင်းမရှိမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်းရောဂါပျောက်ကင်းနဲ့တူသလိုပဲ။ ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအလုပ်လုပ်ရန်မပြုခဲ့ပါလျှင်တခါတလေနှစ်ကြိမ်လုပ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပြီးနောက်, ငါရောဂါလက္ခဏာတွေမှသက်သာရာရစေရန် ပို. ပို. မကြာခဏထိုသို့ပြုမှလိုအပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါထငါးကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီအပင်ပန်းခဲ့ပြန်ဖြတ်တောက်ခိုင်မာတဲ့ဆုတ်ခွာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
Orgasm သည်အစကန ဦး ဖြေလျော့ပေးသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါ ဦး နှောက်သည် opiates၊ dopamine တစ်ချိန်တည်းမှာပင်“ ရပြီ!” အာရုံကြောဓာတု, ပယ်ကျဆင်းသွားသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိစ္စအနေဖြင့်ဤကောင်းသောခံစားမှုများသည်“ ကောင်းသောအလုပ်! fertilization အပြုအမူအတွက်ပါဝငျဘို့။ " Ahhhh … (စိတ်ဝင်စားစရာက neurochemical ဆိုတဲ့အထောက်အထားရှိတယ် လိင်ဆက်ဆံမှု၏သက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားကြသည် တစ်ကိုယ်တော်လိင်မြားထံမှ။ )
စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားရသည့်အခါတိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာကို“ ဆေးဝါး” အနေဖြင့်အသုံးပြုရန်သင်ဆုံးဖြတ်သောအခါမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ အဖြေသည်အမျိုးမျိုးသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်၏ sensitivity၊ သင်အသုံးပြုသောလှုံ့ဆော်မှု၏ပြင်းထန်မှု (အမြင့်ဆုံးသောအဆုံးအပေါ်ဖြစ်ခြင်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဘိုးဘွားများ၏ ဦး နှောက်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားနိုင်သည့်အခြားသဘာဝဆုကျေးဇူးများနှင့်သင်မည်မျှအထီးကျန်နေသည် (အနီးကပ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖော်၊ ချစ်ခင်ထိတွေ့မှု၊
သင့်မှာဒီဆုတွေအများကြီးမရှိဘူး၊ မင်းမှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါကြောင့်သင်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးအလုပ်ပြန်ဆင်းနိုင်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ထွက်ချင်တယ်။ သဘာဝအားဖြင့်၊ သင်သည်အင်တာနက် porn ကို နှိပ်၍ ချက်ချင်းရလဒ်များရရန်အတွက်အလုံအလောက်ပူသောအရာတစ်ခုကိုရှာသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ ဦး နှောက်သည်သက်သာမှုရရန်ပိုမိုနှိုးဆွရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာမင်းကိုတောင်မှညစ်ညမ်းလိုနေနိုင်တယ် မဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှု, ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာနီးပါးအိပ်ပျော်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည် တိုင်း ည စွဲ - စကားပြောသော၌သင်တို့ကို "သည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ခြင်းစိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကရှင်းပြသည် "သင်၏ ဦး နှောက်ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများအတွက် -Norman Doidge။ တစ်နည်းဆိုရသော်အင်တာနက်၏“ ချက်ချင်းပျောက်ကင်းမှု” ကိုအမြဲတမ်းရယူနိုင်သည် တိုးမြှင့်လာသည် သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ။
ငါတို့ကဲ့သို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုအချို့သောပတ် porn သုံးပြီးရပ်တန့်နေသောကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူဤဆိုသညျကား, များစွာသောအစီရင်ခံစာ သိသိသာသာတိုးတက်မှုများ ခံစားချက်အတွက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့် ပို. ပင်အံ့သြလောက်အောင်တစ်ဦး လြော့ပေါ့စေ ခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်ပါတယ်။
အော်ဂဇင်သံသရာသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ မထားဘူး အဆုံး တင်းမာမှုသက်သာရာသောသူတို့ကိုကောင်းသောခံစားချက်တွေကိုအတူ။ ထှတျအထိပျ၏ပြင်းထန်မှုပြီးတဲ့အခါ, အချိန်ကြာ သင့် ဦး နှောက်သည် homeostasis သို့တစ်ပတ်လောက်နေနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်းသင့် ဦး နှောက်၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ သင်၏ဘဝတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများအပေါ်မသက်ဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်များသည်မငြိမ်မသက်မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုစသည်တို့ကိုတိုးမြှင့်ခံစားနေရသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားစိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်သင်နှင့်အတူမှားယွင်းနေသောတစ်ခုခုကဲ့သို့ခံစားမိစေနိုင်သည်။
တကယ်စိတ်ပျက်စရာပါတကား။ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတာကိုပိုခံစားမိဖို့ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုခံစားချက်တွေကိုအခုတိုးလာပါပြီ။ အမှတ်တမဲ့, သင်သည်သင်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို activated "မူးရူးခလုတ်သိပ်ဆွနှင့်အတူ "။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါသင့် ဦး နှောက်ကအဆက်မပြတ်နှိုးဆွမှုများစွာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပုံမှန်ရလဒ်တစ်ခုမှာဖြစ်လာသည် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့။ ဒီအလှည့်အတွက်, လောင်စာအဆိုပါတင်းမာမှုဖြစ်စဉ် (သည်းခံစိတ်) အထက်ကရှင်းပြသည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသင်တစ်ဦးမိတ်ဖက်များကအနည်းဆုံးတိုင်အောင်, သင်၏အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆက်လက်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ကိုကူညီသောအရာလည်းရှိပါသေးတယ်။
အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ပါ။ အင်တာနက်အပြာသည်အမြန်ဆုံးရနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဗီဒီယိုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အဆိုးရွားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါဝတ္ထုပါ၊ ဒါက kinky စတာတွေပါ။ ဒါကြောင့်အနိမ့်အနိမ့်သံသရာမှာလည်းပိုပြီးသိသာထင်ရှားသည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ Masturbate, သငျသညျအကြိုးကြေးဇူးမြားကိုသတိထားမိလျှင်ကြည့်ပါ။
ကြိုးစား ကို restart။ ယောက်ျားများသည်သူတို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေလေ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်မှုနည်းလေလေ…အနည်းဆုံးအချက်အထိဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမမြင့်တက်လာတဲ့ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်လက်ရှိတွင်ဟန်ချက်မညီနေလျှင်ရှာဖွေရန်အချိန်ယူရမည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကမင်းရဲ့စံပြကြားခံဟာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာနိုင်တယ်။
အခြားအရာမှထွက်တွက်ဆရန်စမ်းသပ်မှု သဘာဝ“ စိတ်ဆေး” သာယာဝပြောရေး၏ခံစားချက်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာအောင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုမှီခိုအားထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ဦးနှောက်လက်ပတ်နာရီနှင့်အတူရုန်းကန်နေဘာအကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်ရန် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လို: Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်။